ज्यान लिने धम्कि आएपछि सिके राउतले दिए कडा प्रतिक्रिया !
संघीय सरकारकै मन्त्रीले ज्यानको धम्की दिएपछि सिके राउत ले मुख खोलेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिक कार्यक्रममा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतसहित उनका कार्यकर्तालाई लक्षित गर्दै हिंसात्मक चेतावनी दिएपछि मन्त्री यादवको तीव्र आलोचना शुरू भएको छ ।
जनमत पार्टीले अहिले तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा किसानका विविध माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ । त्यसक्रममा हिजो बुधबार उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेकी मन्त्री यादवलाई जनमत पार्टीको नेतृत्वमा भइरहेको किसान आन्दोलनका आन्दोलनकारीहरूले कालो झण्डा देखाउँदै अवरोध सिर्जना गरेका थिए ।
ठूल्ठूला लाठीमा कालो झण्डा राखेर प्रदर्शन गरिएको थियो । तर बलिदानी दिवसको अवसरमा अभिव्यक्ति दिने बेला मन्त्री यादवले राउतसहित उनका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई सामूहिक नरसंहार गर्न सकिने चेतावनी दिएकी थिइन् ।
गौर राइस मिलमा भएको नरसंहार तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले गरेको दाबी गर्दै राउत र उनका कार्यकर्ताको पनि त्यही हाल हुने चेतावनी यादवले दिएकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको उक्त भिडियोमा मन्त्री यादवले हिन्दी भाषामा भने थिइन् (भावानुवाद)ः
यो गौर(रौतहट)ऐतिहासिक जिल्ला हो । यहाँको राइस मिलको अहिले जीवित इतिहास छ। आज बलिदानी दिवसको दिन हामी हिंसा गर्दैनौं । लाठी भाटा देखाए यहाँको मान्छे पनि लाठी चलाउन जान्छन् । तपाईंको लाठी र भाटालाई तोडेर यहीँ बन्द गराइदिन सकिन्छ ।
गाई र भैंसीको दूध खाएका छौ भने सिंहदरबारमा भेटौं । डाक्टर साहेबले अमेरिकामा घाँसपात खाएका होलान् । हाम्रो शरीरमा गाई र भैंसीको दूधले रगत बनेको छ । डाक्टर साहेबलाई भन्न चाहन्छु, हामीसँग नजुध्नुस् । तपाईंलाई घेराबन्दी गरेर मारी दिइन्छ ।
२०६३ सालमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूबीच झडप हुँदा २८ जनाको मृत्यु भएको थियो। मारिनेमा अधिकांश माओवादीका कार्यकर्ताहरू थिए ।
फोरम कार्यकर्ताले माओवादी कार्यकर्तामाथि सांघातिक हमला गरेका थिए । एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री जस्तो पदमा आसीन भएको व्यक्तिले हिंसात्मक चेतावनी दिएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
मन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले पनि आपत्ति जनाएका छन् । यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई तत्काल मन्त्री पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
यस विषयमा सिके राउतले के भनेः यो एउटा साधारण व्यक्तिले दिएको अभिव्यक्ति होइन, संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा दिएको अभिव्यक्ति हो। त्यो पनि उक्त पार्टीको नेतृत्वको उपस्थितिमा भनिएको अभिव्यक्ति हो । उनको अभिव्यक्ति रौतहटको गौर नरसंहारको स्वीकारोक्ति पनि हो कि हामी सबैले मिलेर २८ जनाको हत्या गरेका थियौं भन्ने ।
उक्त घटनाका फरार अभियुक्तहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्ने तयारी सरकारले गर्नुपर्छ । आपराधिक हिंसात्मक घटनालाई बढावा दिने मन्त्री यादवलाई नेपाल सरकारले तत्काल बर्खास्त गरेर कानूनीरूपमा मुद्दा चलाउनु पर्छ ।
उनको अभिव्यक्तिलाई हामीहरूले किसान आन्दोलनको विरोधमा पनि लिएका छौं। किसान आन्दोलनलाई दबाउने उद्देश्यले नेतृत्वमाथि पनि सिधा प्रहार गरिएको छ । किसान आन्दोलनकारीहरू त्यसप्रति सचेत हुनुपर्छ । तर, मन्त्री यादवले आफूले राउतलाई मारिदिने, वा गौर नरसंहार जस्तै नरसंहार मच्चाउने धम्की दिने कुनै शब्द नै प्रयोग नगरेको बताइन् ।
’बरु उनका कार्यकर्ताहरूले हाम्रा कार्यकर्ताका मोटरसाइकल तोडफोड गरेका थिए । हामीले आयोजना गरेको बलिदानी दिवसको कार्यक्रममा अवरोध गरेका थिए,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ’मैले उनको वा उनका कार्यकर्ताको हत्या गर्ने भनेर कहीँ पनि भनेकै छैन ।’
हिंसात्मक राजनीति गर्न चाहँदैनौं भनेर आफूले भनेको उनले बताइन् । ’रासायनिक मलको आपूर्तिलाई लिएर आन्दोलन गरिरहेको हो भने उहाँ पनि त डाक्टर नै हो, मलको कस्तो अभाव छ भन्ने कुराको त ज्ञान होला नि’ भनेर भनेको उनले जिकिर गरिन् ।
’तपाईं डाक्टर हो भने रिसर्च गर्नुस् कि मलको कारखाना कसरी खोल्न सकिन्छ, सरकारले भारतसँग मल खरिद गर्नका लागि एमओयू गरेको छ । केही दिनमै मल अभाव अन्त्य हुन्छ भनेर भनेको थिएँ,’ उनले थपिन् ।
गौर राइस मिलको प्रसंगमा बोले पनि नरसंहार गरिदिने भनेर धम्की नदिएको उनको जिकिर छ। ’यही गौरको राइस मिलमा मधेश आन्दोलनको महान क्रान्ति भएको थियो । उक्त आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै बाँकी उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्दै जाने भनेको थिएँ,’ उनले भनिन् ।
’मैले बोल्दै नबोलेको कुरालाई लिएर ममाथि झुटो तथा कपोलकल्पित आरोप लगाइएको छ,’ उनले भनिन् । अहिले जस्तो दाबी गरे पनि मन्त्रीले बोलेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।